रिपोर्ट | नुवागी | Page 3
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठका अनुसार भूकम्पले भत्काएका विद्यलयका अहिलेसम्म १६ हजार एक सय ६० कक्षाकोठाको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । १४ हजार ६ सय ७१ कक्षाकोठा भने निर्माणाधीन छन् । दुई हजार ६ सय चार कक्षाकोठा निर्माणका लागि छनोट...
सबिना बानियाँ नुवागी संवाददाता आजभोलि अधिकांश विद्यालयले स्कुल बस सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। विद्यार्थी ल्याउन र पुर्याउन सजिलो हुने भन्दै सञ्चालित त्यस्ता कतिपय बसबाट कहिलेकाहीँ आफ्नै विद्यार्थीको ज्यान समेत लिएका उदाहरणहरू छन्। दुर्घटनाका विविध कारण छन्। बस भित्र बजाइने गीतले पनि दुर्घटनाहरू गराएका उदाहरण...
चैत १० देखि एसईई : राम्रो नतिजा ल्याउन स्कुलले चाहिँ के गर्ने ?
सबिना बानियाँ/ अरु बेला रिया झाको कोठा बेलुका ९ बजे नै अँध्यारो हुनेमा आजकाल रातको १२ बजे पनि उज्यालो देखिन्छ । उनको कोठा उज्यालो हुनुको कारण हो, एसईई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा)को तालिका । परीक्षा तालिका प्रकाशनसँगै उनले एसईई तयारी सुरु गरिसकेकी छिन् । ‘कोइसन...
पढाईको लागि बेग्लाबेग्लै संघर्ष
सबिना बानियाँ/ कथा १ आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिनका लागि कमला मगर आफ्ना श्रीमान र बच्चासँग ७ वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौंमा छिरिन् । काठमाडौं छिरेपछि दायित्व थप भयो, श्रीमान मौसम अनुसारको फलफूल डुलाउँदै बेच्न थाले । उनीसँग कुनै रोजगारी थिएन । श्रीमानको मात्र आयश्रोतले ५...
स्कुलको रोजाइमा पर्दै गोर्खा इको प्यानल
भक्तपुर । इको प्यानलबाट तीव्र गतिमा निर्माण सम्भब भएपछि स्कुलहरुको रोजाइमा गोर्खा इको प्यानल पर्न सफल भएको छ । गोर्खा इको प्यानल नेपालमै बनेको एकमात्र इको प्यानल (प्रिफ्याब्रिकेटेड प्यानल) हो । भूकम्पपछि देशका करिव ४० जिल्लामा इको प्यानलको प्रयोगबाट धमाधम विद्यालय बन्ने क्रम वढेको...
प्रतिवेदन भन्छ : बोर्डिङभन्दा सरकारी स्कूल ‘खत्तम’, गर्ने के ?
काठमाडौं । केन्द्रिय बालकल्याण समितिले तयार पारेको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन ०७५’ ले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर क्रमिक रूपमा खस्कँदै गएको देखाएको छ । विद्यार्थीको सिकाइउपलब्धि निरन्तर खस्कँदै गएकाले विद्यालयको अवस्था सुधार्न सुझाव दिँदै समितिले संस्थागतभन्दा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा गिर्दो रहेको देखाएको छ । त्यस्तै...
प्र.अले चाहेर पनि राख्न सक्दैनन् गुणस्तरीय शिक्षक
काभ्रे । यस वर्षको विश्व शिक्षक दिवसको नारा नै थियो ‘शिक्षा पाउने अधिकार भनेकै गुणस्तरीय शिक्षक पाउनुपर्ने अधिकार हो’ । तर काभ्रेको आशापुरेश्वरस्थित श्री जागृत आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजु वस्नेत भने आफुले ‘गुणस्तरीयहिन शिक्षक’ लाई विद्यालयमा राख्नुपरेकोमा दुखित छन् । राजनितिक कारणले गर्दा, गल्ती गर्ने,...
प्रअको काम के ? ‘माष्टरलाई हेर्ने कि बच्चा पढाउने ?
सबिना बानियाँ काठमाडौं । केही विद्यालयमा विषयगत शिक्षण पिरियड छुट्याएर प्रधानाध्यापक(प्रअ) कक्षा लिने गर्छन् भने केही स्कुलका प्रअ विद्यार्थीलाई जीवन र आदर्शका कुरा सिकाउने र शिक्षकलाई अवलोकन गर्ने गर्छन् । १५ वर्षदेखि भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित अक्सफोर्ड प्राक्टिकल स्कुलका प्रअ रवि दुवाल दैनिक तीन पिरियड पढाउँछन्...
आजैबाट सुधारौं अक्षर : नत्र ज्यान लिन सक्छ !
सबिना बानियाँ भक्तपुर, ९ असोज । के ह्याण्डराइटिङले ज्यान लिन सक्छ ? ह्याण्डराइटिङले कसरी ज्यान लिन्छ ? विश्वास गर्न गा¥हो हुन सक्छ तर संसारमा ह्याण्डराइटिङकै कारण ज्यान जाने गरेको तथ्यांक पनि छ । नेपालमा यसको तथ्याङ्क नभए पनि, सन् २००६ को जुलाईमा ‘नेशनल एकेडेमीज्...
#Euro kids bhaktapur